Safidy safidy lahatsoratra tsara indrindra (2020) - Toerana malalaka sy karama - Lists
Safidy safidy lahatsoratra tsara indrindra (2020) - Maimaimpoana & Karama
Textheet dia vavahadin-tserasera fianarana izay ahafahan'ny mpianatra mamaha ny fisalasalany manoloana ny fanontaniana rehetra ananan'izy ireo. Ny texteet dia nanampy ny mpianatra tamin'ny famitana ny entimodiny. Textheet dia vavahadin-tserasera malaza satria afaka mahita vahaolana maimaim-poana ny mpianatra. Saingy indrisy, tsy mandeha intsony ny Textheet. Noho izany dia mitondra ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Textheet izahay mba hahamora ny asanao.
Ao amin'ny taranaka ankehitriny izay misy na inona na inona amin'ny alàlan'ny Internet, dia hitan'ny mpianatra fa mora kokoa ny miditra amin'ny fitaovam-pianarana rehetra an-tserasera nefa tsy mividy boky maro ho an'ny loharano. Ny kilasy na ny fampianarana an-tserasera dia nanjary fahita ankehitriny. Ny famitana ny enti-mody na ny fanendrena azy dia iray amin'ireo olana lehibe atrehin'ny mpianatra rehetra. Azo atao mora kokoa ny fiainan'ny mpianatra iray raha misy amin'ny Internet ny loharanom-pahalalana ho an'ny entimodiny. Noho izany dia misy vavahady E-fianarana maromaro manampy ny mpianatra hahatakatra tsara kokoa ny foto-kevitra.
Mitady fihenam-bidy amin'ny Windows 10? Raha eny Mangataha Windows 10 Fihenan'ny mpianatra
Fa maninona no ilaintsika ny mifamadika amin'ny Teeksheet?
Textheet no vavahadin-tsoratry ny mpianatra tiany indrindra amin'ny fidirana maimaim-poana amin'ny loharano rehetra. Iray amin'ireo tranonkala iraisan'ny mpianatra ampiasain'ny mpianatra, rehefa nesorina izy io noho ny filazan'ny copyright an'i Chegg dia maro no very hevitra. Mpianatra maro izao no mitady tranokala vaovao mahasoa izay afaka manampy amin'ny fianarany.
Tombontsoa amin'ny vavahady fianarana an-tserasera:
Ny fomba fampianarana nentin-drazana dia tsy dia mandaitra loatra amin'ny fitazonana izay efa nianarana. Ny tranokala e-mianatra dia miasa ho toy ny torolàlana ho an'ny mpianatra izay sahirana amin'ny fahazoana ny hevitra rehetra. Atao mahafinaritra izao ny fianarana amin'ny alàlan'ny fitaovana fanavaozana isan-karazany. Manomboka amin'ny kilasy an-tserasera ka hatrany amin'ny valin'ny fanontaniana izay zava-dehibe amin'ny fanadinana, ny mpianatra dia afaka mahazo loharanom-pahalalana marobe miaraka amin'ny syllabus eny amin'ny oniversite. Amin'ny fianarana an-tserasera, ny mpianatra dia manana safidy hisafidy izay tiany hianarana ary handoavana izany ihany. Ireo fomba fianarana ireo dia voaporofo fa mahomby tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izany dia nahatonga ny fampidirana vavahady fianarana maro manerantany.
Tranonkala maro no atao vavahady fianarana an-tserasera. Ireto ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny Texteet izay azonao andramana amin'ny 2020.
Solon-tsoratry ny lahatsoratra tsara indrindra (2020)
1. Mahery fo Mazava ho azy
Course Hero dia sehatra ianarana an-tserasera izay ahafahan'ny mpianatra manana fidirana amin'ny fitaovam-pianarana ho an'ny taranja samihafa. Ireo loharanom-pahalalana ireo dia atolotry ny vondron'olona mpianatra sy mpanolo-tsaina. Manome olana amin'ny fampiharana izy ireo, torolàlana fandalinana, lahatsoratra, kilasy horonantsary ho an'ireo mpianatra amin'ny alalàn'ny mpampianatra isan-karazany miaraka amin'ny valiny. Course Hero dia tsy manamarina ny tompon'ny zon'ny mpamorona na inona na inona apetraka ao amin'ilay tranonkala. Izany dia mitarika amin'ny fampiasana diso ny loharanon-karena tany am-boalohany an'ny tompona zon'ny mpamorona. Ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona Digital Millennium dia milaza fa manaisotra izay atiny rehetra rehefa voalaza fa fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona.
Ny mombamomba anao manokana an'ny mpampiasa rehetra ny Mahery fo toa ny anarana, mailaka, adiresin'ny mpampianatra dia aseho amin'ny pejiny. Ireo dia mety hiteraka olan'ny tsiambaratelo amin'ny alàlan'ny fampiasana tsy ara-dalàna ny mombamomba anao. Ny loharanom-pahalalana navoaka tao amin'ny Course Hero dia misy ny taratasy fangatahana sy ny vahaolana amin'ny fanadinana teo aloha. Rehefa mahazo mamela ny fanontaniana aorian'ny fanadinana ny mpianatra dia mpianatra maro no maka tahaka ny enti-mody sy ny vahaolana amin'ny tranokala
24/7 fidirana amin'ny loharano
Maherin'ny 40 tapitrisa fitaovana fianarana manokana
Navoaka ny mombamomba ny mpampiasa rehetra
Mamitaka amin'ny fanadinana ny mpianatra
Course Hero dia manolotra drafitra maimaim-poana Basic izay ahafahan'ny mpampiasa mampakatra ny loharanon'izy ireo manokana ary mahazo fidirana amin'ireo fitaovana. Ny drafitra Premium dia safidy telo,
Mpikambana isan-taona $ 9.95 isam-bolana
Drafitra isam-bolana amin'ny $ 19.95 isam-bolana
Drafitra isam-bolana amin'ny $ 39.95 isam-bolana
Chegg dia orinasa teknolojia fanabeazana, izay manome boky fampianarana nomerika, fampianarana an-tsary, sns. Misy mpanjifa manodidina ny 2,9 tapitrisa ao amin'ny Chegg Services hatramin'ny martsa 2020. Ankoatra ny boky fampianarana sy serivisy an-tserasera dia afaka mitady vatsim-pianarana sy mpianatra ny mpianatra. Tsy vitan'ny hoe manome loharanom-pahalalana an-tserasera i Chegg fa afaka manofa boky fianarana avy amin'ny tranonkala ny iray.
Nisy ny fanambarana fa ny mpianatra miaraka amin'ny fanampian'ny Chegg, mahazo ny fahazoana miditra amin'ny taratasy fanontaniana napetraky ny mpianatra, ary manambaka amin'ny fanadinana ataon'izy ireo. Ary koa, ny serivisy fizarana rakitra natolotr'i Chegg dia voalaza fa manana olana satria fanitsakitsahana ny tsy fivadihana akademika io.
Manofa boky fianarana ara-batana
Vahaolana avy amin'ny oniversite mihoatra ny 6.400
Misy ny fiofanana sy vatsim-pianarana
Mamitaka ny mpianatra amin'ny fanadinana
Serivisy fizarana rakitra misy olana
Famandrihana fototra amin'ny $ 14.95 isam-bolana.
30 $ isam-bolana ho an'ny fidirana feno
Coursera dia mpamatsy fampianarana an-tserasera an-tserasera amerikana. Natsangan'ny profesora momba ny informatika ao amin'ny University Stanford, Coursera dia manolotra mari-pahaizana, manampahaizana manokana, taranja sns. Ny fampianarana omena dia atolotry ny anjerimanontolo isan-karazany sy ny andrim-pampianarana hafa amin'ny lohahevitra maro. Ny fandaharam-pianarana Coursera dia manodidina ny efatra ka hatramin'ny roa ambin'ny folo herinandro ary ny fampianarana dia lahateny an-tsary iray na adiny roa isan-kerinandro izay feno pitsopitsony sy manampy ny mpianatra. Izy io koa dia misy hatrany amin'ny 104 fampianarana an-tariby fangatahana izay ahafahan'ny mpianatra mahazo fidirana amin'ny fitaovana rehetra mikasika ny fampianarana mialoha ary afaka hamita izany araka ny fotoana sy ny takian'ny mpianatra.
Ny fampianarana natolotry ny Coursera dia tsy manome afa-tsy mari-pankasitrahana ho an'ny mpianatra. Ny kilasy dia tsy zaraina tahaka ny any amin'ny oniversite. Ireo loharanom-pahalalana natolotra ho an'ny mpianatra dia tsy ho azo aleha rehefa vita ny fampianarana ary navoaka ny taratasy fanamarinana
Kilasy lava be pitsiny
Misy ny fampianarana ilaina amin'ny fangatahana
Tolotra mari-pahaizana feno ihany koa
Ny mari-pahaizana natolotra
Tsy misy naoty omena amin'ireo fampianarana ireo
Raha vantany vao vita ny fampianarana dia tsy afaka miditra amin'ireo fitaovana ampiasaina ianao
39-79 $ isam-bolana fisoratana anarana
Fitsarana maimaimpoana 7 andro ho an'ny mpampiasa vaovao
Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovam-pianarana isan-karazany sy ny fomba fanabeazana vaovao, ny tutizizan'ny Quizlet amin'ny alàlan'ny karatra flash, lalao ary fitsapana. Miaraka amin'ny mpampiasa maherin'ny 50 tapitrisa, laharana iray amin'ireo tranonkala 50 ambony any Etazonia izy io. Manampy amin'ny fanaovana tsianjery amin'ny fampiasana Flash Cards, Gravity, fanazaran-tena amin'ny fanoratana, fitsapana Speller, sns. ireo mpianatra amin'ny fitazonana izay nianarany. Ity fomba ity dia voaporofo fa tena mandaitra eo amin'ny mpianatra
Tahaka ny vavahadin-tserasera rehetra, mampiasa ny fomba ratsy amin'ny Quizlet ny mpianatra mba hidirany amin'ny taratasy fangatahana isan-karazany ary hosoka amin'ny fanadinana. Manana fotoam-pitsarana 15 andro izy ary aorian'izay dia tsy maintsy aloa ny saram-pisoratana anarana hahazoana miditra amin'ireo serivisy
Tranonkala fanabeazana amerikana mitombo haingana indrindra amin'ny 2015
Kilasy sy lalao mivantana
Ny Quizlet's API dia misy intsony
Ny mpianatra dia hita fa manambaka
Ny maodely tsy andoavam-bola dia mitentina 35,88 $ isan-taona
Ny Quizlet Plus dia manampy fiasa bebe kokoa mitentina $ 47.88 isan-taona
Fikambanana tsy mitady tombom-barotra izay manampy amin'ny fitantanana tombana ireo andrim-pampianarana samihafa. Ny College Board dia manome loharanom-pahalalana ho an'ny mpianatra, ny ray aman-dreny ary ny oniversite amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ny Birao Kolejy dia miasa toy ny fanampiana ara-bola an'ireo mpianatra sy oniversite izay marefo ara-bola
Nahazo fanakianana betsaka ny College College noho ny saram-panadinana avo lenta sy ny fiankinan-dohany amin'ny syllabus namboarina izay tsy mifantoka amin'ny fampivelarana ny fahalalan'ny mpianatra. Nisy ny tatitra momba ny fivarotana ny angon-drakitra ho an'ny mpianatra ao amin'ny College Board
Manome fanampiana ara-bola izany
Omena fandaharam-pianarana amin'ny antsipiriany
Ny Syllabus dia nohamarinina
Saran'ny fisoratana anarana 26 $
Fiampangana fanampiny amin'ny fitiliana tsirairay natao
Ny StudyLib dia fomba iray hafa amin'ny Textheet izay manome andraikitra sy enti-mody voavaha isan-karazany. Ity atiny ao amin'ny tranokala Studylib ity dia azo sintonina sy azo idirana amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia manana vondrom-piarahamonina ifanampian'ny mpianatra amin'ny alàlan'ny fandefasana ireo fitaovan'ny fianarany manokana.
Ny mpianatra rehetra dia afaka mamorona fanangonana fitaovana manokana ka tsy misy olana amin'ny fitadiavana azy isaky ny te hijery azy ianao. Ny lesoka tokana dia ny vavahady tsy matihanina toy ny vavahady fianarana amin'ny Internet hafa.
Fanangonana manokana ny fitaovanao
Niforona ny vondron'olona mpianatra
Tsy voalamina ny atiny
Solosaina takelaka lahatsoratra ahafahan'ny mpampiasa mifandray amin'ny tranonkalany avy amin'ny toerana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Azonao atao ny mampiasa fitaovana marani-tsaina toa ny telefaona na takelaka hidirana amin'ireo fitaovana. Ny fisoratana anarana maimaim-poana dia azo atao ary ny mpianatra dia afaka mahazo fidirana amin'ny fampianarana fototra
Raha mitady fampianarana hafa ankoatry ny misy any amin'ny oniversite ianao, Skooli dia tsy safidy mety satria voafetra amin'ny loharano. Ireo fitaovam-pianarana ampiasaina dia tena fototra fa tsy zavatra ivelan'ny boaty
Midira maimaim-poana ary misoratra anarana
Miresaka amin'ny tutors iray
Voafetra amin'ny syllabus oniversite
Voafetra ny fitaovana ianarana
$ 10 isan-kerinandro hatramin'ny $ 30 isan-kerinandro
Miaraka amin'ny iray amin'ireo mpampiasa interface indrindra indrindra, azon'ny mpianatra ampiasaina mora foana ity tranonkala ity. Ilaina indrindra ho an'ireo mpianatra manondro ny syllabus amerikana. Izy io dia azo ampiasaina ho loharanom-pahalalana tsara ivelan'ny fitaovam-pianarana. Samy mandray anjara amin'ny loharanom-pahalalana misy na ny mpianatra na ny mpampianatra. Homena fanampiana ireo mpianatra momba ny taranja samihafa. Ny fanampiana an-tokatrano dia misy ho an'ny lohahevitra marobe manomboka amin'ny Matematika ka hatramin'ny Zavakanto.
Ny lafiny loop dia ny fisian'ny dokam-barotra be loatra ka manelingelina ny fampiasana azy. Ankoatra ny fanampiana any an-trano dia misy fizarana mamaly fanontaniana ahafahan'ny mpianatra mifampiresaka amin'ny mpampianatra sy mamaha ny fisalasalany
Misy ny valiny fanontanina
Ny interface interface tsotra dia mamonjy fotoana
Silabus amerikana matetika no misy
Drafitra fototra maimaim-poana
Drafitra premium manomboka amin'ny $ 4 isam-bolana ka hatramin'ny $ 8 isam-bolana
Tranonkala fianarana izy io ahafahanao mahita boky fampianarana faharoa. Ny fanontana isan-karazany ny boky fampianarana sy fitaovam-pianarana hafa dia hita amin'ny vidiny mirary. Izy io dia voafetra amin'ny fanofana boky sy fividianana boky. Azonao atao koa ny mivarotra ny bokinao teo amin'ny tranonkala. Izy io dia miasa ho toy ny vondrom-piarahamonin'ny mpianatra izay ahafahan'ny olona mividy boky amin'ny vidiny somary ambany kokoa.
Tsy vavahady fianarana kilasy horonantsary ho an'ny mpianatra io. Boky ihany no azo entina sy amidy amin'ny alàlan'ny Bookfinder
Boky fampianarana amin'ny vidiny mora kokoa
Mora ny mampitaha ny vidiny
Izy io dia natokana indrindra amin'ny fikarohana boky ara-batana
Tsy misy kilasy an-tserasera
Ny vidin'ny boky novidiana tamin'ny alàlan'ny mpitahiry boky dia miankina amin'ny boky sy trano fanontana.
Ny vavahady fanampiana dia tsy vavahadin'ny fianarana ho an'ny rehetra. Ny ankamaroany dia ho an'ny Ph.D. mpianatra izay manome taratasy fikarohana sy serivisy hafa. Tsy voafetra ho an'ny fikarohana ataon'ny tsirairay fotsiny izany, fa azo atao koa ny manao fikarohana momba ny vondrona. Ph.D. Mila manao taratasy fikarohana maro ny mpianatra. PaperHelp dia manome taratasy santionany miaraka amin'ny fanampian'ny mpianatra izay afaka mahazo hevitra momba ny lohahevitra rehetra.
Ireo mpampianatra isan-karazany dia hanampy anao hahatakatra ny lohahevitra anaovana fikarohana. Ireo mpianatra dia afaka mampiasa ny serivisy ao amin'ny PaperHelp hanafatra ireo taratasim-pikarohana amin'ny Internet ary hatolotra ao anatin'ny fotoana io.Saingy tsy natao ho an'ny rehetra ireo taratasy fikarohana ireo. Ny PaperHelp dia voafetra ho Ph.D ihany. mpianatra sy mpampianatra
Afaka manao ny taratasim-pikarohany ny mpianatra
Ny fikarohana vondrona dia azo atao
Voafetra amin'ny Ph.D. MPIANATRA
$ 12 ho an'ny fototra ary fampiakarana miorina amin'ny isan'ny pejy sy sokajy fikarohana.
1Q. Azo antoka ve ireo fanoloana hafa rehetra amin'ny Textheet ireo?
taona:Amin'ny tranga sasany amin'ireo tranonkala dia misy ny tatitra momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ny tompona voalohany. Rehefa mampakatra antontan-taratasy ny mpampiasa iray dia tsy voamarina raha izy no tena tompon'ilay rakitra
2Q. Mbola miasa ve ny Textheet?
taona:No TeXTeet dia vavahadim-pianarana maimaim-poana izay nanome fidirana amin'ny loharanom-pahalalana samihafa nefa tsy mandeha intsony.
3Q. Fa maninona no nikatona ny Tetezety?
taona:Mpianatra maro no nampiasa tsy tapaka ny TeXTeet. Nampiasa tsy ara-dalàna ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala hafa. Nosoratan'ny vavahady an-tserasera Chegg ny takelaka Chegg ary nilaza fa nanao kopia ny fitaovan'izy ireo i Textheet ary nampiasainy ho azy ireo. Noho ny fitaky ny zon'ny mpamorona nataon'i Chegg, dia nesorina i Teeksheet.
Ireo tranonkala voalaza etsy ambony ireo dia ny sasany amin'ireo vavahadin-tsoratry ny besinimaro malaza indrindra izay afaka miovaova ho an'ny Textheet. Mpianatra maro no niankina tamin'ny Textheet noho ny loharanon-karenany. Rehefa nijanona tsy niasa intsony ny Te Textheet dia nitombo ny fangatahana tranokala fianarana iray hafa. Ireo vavahady ireo dia nampiasaina be tamin'ny mpianatra mitady fitaovam-pianarana hahalalàna ny lohahevitra rehetra. Ny habaka samihafa dia manana habaka hafa. Miankina amin'ny zavatra ianaranao sy ny drafitra misy, ny vavahady fianarana dia azo fidina.
Makà fitsapana maimaim-poana mandritra ny 30 andro
Adobe Creative Cloud ho an'ny mpianatra
Perish - Mpitifitra Co-Op Mpilalao 4 avy amin'ny HandyGames
ny fomba fanaovana mozika anao
misintona sarimihetsika netflix amin'ny mac
netflix ity lohateny ity dia tsy misy eo noho eo
hampandeha ny fandaharana amin'ny fahitalavitra paoma